Maxaa laga bartay ciyaarta R.madrid & m.city – SOOMAALPEDİA
Real Madrid ayaa soo afjartay riyadii tababare Pellegrini kaas oo doonayay inuu guul kusoo afjaro maalmihiisa Man City ,kadib markii ay xalay 1-0 ku qaariiyeen lugtii labaad ee semi final-ka Champions League taas oo ka dhigan in kooxdda cad cadku ay final-ka wajihi doonto Attletico Madrid.
Hadaba maxaa laga bartay ciyaartan?
1-Real Madrid ayaa markii 14 aad gaartay final-ka koobka horyaalada yurub.
2-Waxaa ay noqon doontaa markii sadexaad,4-tii sano ee ugu dambeysay final-ka Champions League oo ay isku yimadaan kooxo isku wadan ah.
3-Kooxdda Real Madrid ayaa badisay dhamaan lix kulan oo ay xili ciyaareedkan gurigeeda ku ciyaartay Champions League goolna lagama dhalin.
4- Cristiano Ronaldo ayaa ciyaaray markii 17 aad semi final-ka Champions League ,waxaa uu kula biiray ninka ugu badan ee Xabi Alonso.
5- Sergio Aguero ayaa ku fashilmay inuu gool dhaliyo shantisii kulan ee ugu dambeysay Champions League.
6-Goolhaye Keylor Navas oo u qabta Real Madrid ayaa shabaqiisa gool ka bad baadiyay 11 ka mid ah 12 kulan oo uu kasoo muuqday Champions League.
7-Saddex xili ciyaareed oo isku xigta Man City waxaa kasoo reebayay Champions League kooxo Spanish ah.
8-Xili ciyaareedkii sadexaad oo xiriir ah final-ka Champions League waxaa gaaray macalimiin shaqada haya sanadkoodii koowaad waa (Diego Simeone 2014, Luis Enrique 2015, Zinedine Zidane 2016).